Agromart | Agricultural Marketplace Nepal काउली खेती गर्ने तरिका – Agromart
Q 1. काउलीको फूल (Cauliflower)को सतहमा पानीले भिजे जस्तो खैरो हुने (Browning) के कारणले हो? यस्तो समस्याबाट कसरी वच्न सकिन्छ ?
Q 2. ईट बुट्टे पुतली (Diamond Back Moth) कीरा कसरी चिन्ने ? यसले काउलीवालीलाई कसरी नोक्सानी पुर्याउँछ र यसको रोकथाम कसरी गरिन्छ ?
Q 3. ब्लेन्चिङ्ग (Blenching) भन्नाले के बुझिन्छ र ब्लेन्चिङ्ग हुने खालका जातहरु कहिलेकाहीँ पातले छोपिदैँनन किन होला ?
Q 4. पातभित्र सुरुङ्ग वनाउने कीराले विरुवालाई नोक्सानी पुर्याउँदछ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 5. काउली कति तापक्रममा र आद्र्रतामा कति दिन सम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ ?
Q 6. काउली वाली काट्न तयार भयो भनी कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ ?
Q 7. कहिले काही फूलकोपीको वीच भागवाट साना हरिया पात वाहिर देखिन्छ के कारणले होला ?
Q 8. काउलीको फूल (Curd) मा भुस (Riceyness) निस्कने कारण के हो र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 9. काउली कुन वेला काट्न उपयुक्त हुन्छ ?
Q 10. काउली वाली ढुवानी गर्दा कुन–कुन कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ?
Q 11. काउलीको ग्रेडिङ्ग गर्ने तरिकाहरु के के हुन् ?
Q 12. काउलीको फूल (Curd) लाई ढुवानी गर्दा कसरी वचावट गर्न सकिन्छ ?
Q 13. कहिले काँही काउलीको फूल (Curd) ज्यादै सानो लाग्दछ र खान योग्य समेत हुँदैन यसको कारण के होला र कसरी ?
Q 14. काउलीको पात साँगुरो भई पुच्छर जस्तो देखिने कारण के हो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
Q 15. काउलीको मध्य भागमा खोक्रो र कालोपन के कारणले आउँदछ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
Q 16. उफ्रने खपटे कीराहरु कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
Q 17. लाही कीरा काउली वालीको लागि कति हानीकारक छ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
Q 18. काउलीको पातमा कीराले जाली कसरी वनाउछ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नु पर्दछ ?
Q 19. काउली खेतीमा सिचाईका विधि के के छन् र कसरी गरिन्छ ?
Q 20. काउली खेतीमा गोडमेल र मलखादको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
Q 21. काउली खेतीको नर्सरीका लागि कस्तो जमिनको अवाश्यकता पर्दछ ?
Q 22. किवोजाईन्ट जातको काउलीको विशेषता के छ ?
Q 23. काउलीको गाँठो रोग (Club Root) कस्तो जमीनमा देखापर्दछ ? यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
Q 24. वेमौसमी खेती गर्न कुन कुन कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ ?
Q 25. वेमौसमी रुपमा खेती गर्न कुन कुन जातहरु उपयुक्त हुन्छन् ?
Q 26. काउलीको वीउ उम्रने वित्तिकै फेद कुहिएर ढल्ने मर्ने गर्दछ किन ? यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
Q 27. काउली खेतीमा वेर्ना जर्खराउने के हो र अगौटे जातका काउलीका वेर्नाहरुलाई जर्खराउने गरिन्न किन ?
Q 28. काउलीका मध्यम र पछौटे जातहरु कुन कुन हुन् ?
Q 29. काउलीका अगौटे जातहरु कुन कुन हुन् ?
Q 30. नेपालमा काउली खेतीका लागि राम्रो र प्रचलित स्थानीय जात कुन हो र किन ?
Q 31. काउली खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त हुन्छ ?
Q 32. काउली कस्तो हावापानीमा हुने तरकारी वाली हो ?
Q 33. काउली समूह अन्तर्गत कस्ता र कुन कुन तरकारी वाली पर्दछन् ?